अवैध नियन्त्रण गर, बैध जोगाउ | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ९ चैत्र २०७६, आईतवार ०८:५०
गोरखा नगरपालिका १० छेवेटारमा युवाहरुले आधुनिक प्रविधिबाट संञ्चालन गरेको इटा उद्योग अहिले बन्द छ । पालुङटार नगरपालिका, शहिद लखन गाउँपालिका लगायतका ठाउँमा स्थानीयले स्वरोजगार बनेर चलाएका उद्योग निरन्तर चल्न सकेन । पुराना केही वैध उद्योगहरु धाराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । कारण उनीहरुले अवैध रुपमा जिल्ला भित्रिएका र बिना दर्ताका उद्योगले उत्पादन भएका इटा सँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकेनन् । दर्ता नभएका, कर छलेर चलेका उद्योगले सस्तोमा इटा बिक्री गर्दा वैध उद्योग धाराशायी बनेको हो । बाहिर जिल्लाबाट एउटा इटा भट्टाको भ्याट बिल बनाउने र ढुवानी गर्ने तर उत्पादन भएको उद्योग दर्ता नगर्ने परिपाटी छ । त्यहाँ तयार भएको इटा कर तिर्नु नपरेपछि यहाँ उत्पादन हुने भन्दा सस्तोमा बिक्री गर्छन ।
भुकम्पपछि गोरखामा घर निर्माण गर्ने अधिकासंले इटा प्रयोग गरेका छन् । सस्तो मात्रै खोजेर सर्वसाधारणले घर बनाएका छन् । दर्ता कुन भएको कुन नभएको भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । घरेलु तथा साना उद्योग बिकास कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा दर्ता नभएका उद्योगलाई दर्ता गराउन वा बन्द गराउन सक्नुपर्छ । तबमात्रै कर तिरेर चलेका उद्योगलाई न्याय हुन्छ ।केही समय प्रहरीले जिल्लाभित्रने इटाको गाडी अनुगमन गर्ने, कागजात माग्ने, उद्योगको प्रमाणित बिल माग्ने गरेको थियो । यो क्रम अहिले रोकिएको छ । यसले जिल्लामा भएका उद्योग बन्द गर्न दबाव परेको छ । अर्कोतिर यहाँ नै केही ब्यवशाय गर्ने योजना बनाएका युवाहरुलाई निरुत्साहित गरेको छ । सरोकारवाला निकायले यसको अनुगमन गर्ने, कम लागतमा यहाँकै उद्योगबाट इटा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गराउने तर्फ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।